कुलमानलाई प्रचण्डले औधी माया गर्नुको रहस्य बाहिरियो ! – GALAXY
कुलमानलाई प्रचण्डले औधी माया गर्नुको रहस्य बाहिरियो !
त्यसयता पनि गाडी फिर्ता ल्याउन प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता, अनुरोध र प्रयास गर्दै आयो तर शाही गाडी फिर्ता दिने सोचमै नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले अब आफ्नो निजी सवारी जस्तै गरी ढुक्कसँग प्रयोग गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २०७४ साउन ११ गते ऊर्जा मन्त्री बनेका शाही करिब ८० दिनपछि अर्थात् असोज ३१ गते जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए ।
पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि प्राधिकरणको स्रोत र त्यहाँका महँगा आरामदायी गाडीमा नजर लगाउने नेताहरूको प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । साथै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरूले समेत पदमा टिकिरहन र आफ्नो कुत्सित स्वार्थका लागि नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई गाडी बाँडिरहने परम्परामा सुधार आएको छैन ।